Prezidaantii Afrikaa kibbaa Siiyriil Raamapooza (suuraa faayilii)
Walwaraansaa Raashaa fi Yukireen gidduutti taasifamaa jiruu irratti akka garee qabachuu hin barbaanne Prezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiyriil Raamapoozaa irraa deebi’ani ibsuun isaanii gabaasameera.
Raashaa abaarani,i Yukireeniin deggeruu qabuu jedhamee qeeqa irratii dhihachaa tureef kan deebii kennan Raamapoozaan, wal dhaabiinsichaa kan furuu danda’uu wal waraansa fi qoqqobbii diinagdee ittu hin ta’in, waliin maryyachuudha jechuudhaan ijannoo isaanii irratii akka cichan gabaasameera.
Gabaasinii Lindaa Giveetaash Johaansiberg irra qindeesite akka ibsutti Afrikaan kibbaa waltii dhufeenyaa seena qabeessa ta’e karaa Siyaasatiif Dinagdeetiin Raashaa waliin qabduu eegdee turuu barbaaddi.
Waltii dhufenyii fi froomnii Raashaa fi Afrikaa kibbaa bara 1960 yemuu Tokkumaa Soviiyeet irraa kan jalqabuu yemuu ta’u, tokkumaan Sooviiyeet qabsoo farraa Appaartaayid deggeruudhaan warren bilisumaadhaaf lolan gargaaraa turte.
Boodaa irras , paartii biyyatti isa biyya bulchaa jiru dabalatee namoottan siyaasaa Afrikaa kibbaa hidhata Raashaa waliin qaban akka jabeessaa deeman kan ibsee gabasii Liindaa Givetaash dhaabanii Presidaantii Afrikaa kibbaa duraaniin Jaaqoob Zuumaan hundaa’e Prezidaantii Raashaa Viladimiir putiiniif akka sagalee degersaa kennaa ture ibseera.